အကောင်းဆုံး Free Fire နာမည်ပေးခြင်း | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire အကောင်းဆုံး F...
အကောင်းဆုံး Free Fire နာမည်ပေးခြင်း
IGNs လို့ခေါ်တဲ့ In-Game Names နာမည်တွေဟာ gamer ၁ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အထူးခြားဆုံး အခရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာနာမည်တွေဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နာမည်ကနေ ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ၊ ကြောင်တောင်တောင်နာမည်တွေကနေ နာမည်ကြီးနာမည်၊ နာမည်အရှည်ကြီးတွေ တစ်ခါတစ်လေ ရူးကြောင်ကြောင်နာမည်တွေလည်း ပါတာပေါ့။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော ကစားသူအတိုင်းအတာနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ နာမည်ဆင်တူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဤနာမည်ကို ယူပြီးသွားပါပြီ” ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးတွေတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ၊ တချို့သော ဂိမ်းဖန်တီးသူတွေကတော့ unique characters ( symbols ) တွေကို နာမည်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခါ ကစားသူတွေအတွက် ပိုလွယ်ကူပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ Free Fire မှာဆိုရင် ကစားသူတွေက သူတို့ရဲ့ IGN တွေကိုဖန်တီးရာမှာ special characters တွေတော်တော်များများသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ post ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့က ကစားသူတို့ရဲ့ နာမည်ကို ဘယ်လိုတောက်ပြောင်ပြီးစတိုင်ကျတဲ့နာမည်တစ်ခုရအောင် သင်ပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်!
သင်တို့ရဲ့နာမည်ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုကို စဉ်းစားပါ
စတင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန် နဲ့ playstyle ကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်တဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုကို စဉ်းစားဖို့ပါပဲ။ ကစားသူတော်တော်များများကတော့ ဒီလို သဘောတရားတွေထဲက ရွေးချယ်ကြတယ်။ တိရစ္ဆာန်ထဲကဆို ( Tiger, Dragon) နာမဝိသေသနဆို ( The Proud, Mr. Courage) နာမ်တွေထဲက ( General Sniper, The Assassin) နဲ့ သူတို့နှစ်သက်တာတွေ ( Relentless – Magnum Uzi ရဲ့ rapid-fire ကိုယူထားတဲ့ idea )တွေပါ။ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ထဲက၊ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းထဲက character တွေရဲ့ နာမည်တွေကို အသုံးပြုတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး ထူးခြားချင်ရင်တော့ anagrams (စကားလုံးတွေကို ပြန်ပြောင်းစီထားတာ) တွေသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ( Video Game = Give A Demo ) ဒီထက်ပိုရှုပ်ချင်ရင် စကားလုံးတွေကို အသေးနဲ့အကြီးရောလိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် နံပါတ်တွေနဲ့ရောထားတာ ( “O” ကို zero-0 ပြောင်း၊ “I” ကို one-1 ပြောင်းရေးတာမျိုးပေါ့)။ Special Characters တွေကိုလည်းထည့်ရေးလို့ရသလို တချို့နေရာတွေမှာတော့ ထူးခြားတဲ့ CSS font တွေပြောင်းရေးလို့ရပါသေးတယ် ဒါကတော့ဂိမ်းပေါ်မူတည်ပြီး ရမရရှိပါတယ်။ ( ပြီးတော့ နာမည်ကိုဘယ်လောက်အရှည်ထိပဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတာပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။)
သင်ဟာ hardcore gamer ၁ယောက်အဖြစ် တော်တော်ကြာကြာရပ်တည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတ IGN ရှိထားပြီးသား ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုအတွက် နာမည်အသစ်ပေးရတာတော့ သင့်အတွက် ဘာမှ အပန်းကြီးစရာရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့် Free Fire နာမည်ကို ရေးဆွဲခြင်း
သင့်ရည်ရွယ်ချက်က Free Fire မှာ battle royale ဆော့ကြတဲ့သူတွေထဲက ကွဲထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကြံ၁ခုက သင့်နာမည်ကို တခြား font တစ်ခု သို့မဟုတ် တခြားခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ symbol တွေက်ုပြောင်းဖို့ပါပဲ။ ဘယ်လိုစကြမလဲဆိုရင် Toptal Designers ကိုမှီငြမ်းပြီး ထူးခြားတဲ့နာမည်တစ်ခုတီထွင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ “Dragon” ဆိုတဲ့နာမည်အတွက် sample တစ်ခုတီထွင်ကြည့်တော့ ※ʢ ÐȑȁȢɸɲ ʡ※ ဆိုတဲ့ ဒီဒီဇိုင်းကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နဲ့ အဆောင်အယောင်လိုမျိုး effect တွေပါအောင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို တီထွင်မှုတွေအတွက် IGN Generator ကိုလည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်။ အကြံဥာဏ်၁ခုပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Nick Finder Free Fire ကို အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးဒီဇိုင်းတွေကို ကူးယူပြီး နာမည်အပိုင်းကိုတော့ သင်သဘောကျတဲ့ IGN နဲ့အစားထိုးလို့ရပါတယ် ဒါမှမဟုတ် သင့် IGN ပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကို ရှာချင်လည်း ရပါသေးတယ်။ အဲဒီလို လွယ်ကူပြီး ရှင်းလင်းပါတယ်နော် copy paste လုပ်ရုံပါပဲ။
ဒါကတော့ ဥပမာ တစ်ချို့ပါ
ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိထားရမှာက ဒီလို ဆန်းဆန်းပြားပြား symbols တွေများများစားစားပါတဲ့ name generator တွေကိုသုံးတဲ့အခါ PC နဲ့ Android users တွေနဲ့ယှဉ်ရင် iOS devices တွေမှာ သုံးလို့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် ( symbols တွေက Question Mark တွေပဲပေါ်နိုင်ပါတယ်)။
ထူးခြားတဲ့ Free Fire နာမည်တစ်ခုတီထွင်ဖို့ အားစိုက်ဖို့နည်းနည်းလိုပြီး အချိန်လဲကုန်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက ကိုယ့်နာမည်တစ်လုံးဟာ ဂိမ်းထဲမှာ ကျန်ရစ်မယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပဲ ဆိုတာကိုပါ။ ဒါအတွက် အချိန်ပေးရမှာကိုလည်းတွေးပြီး မတွေဝေပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် သင်ဟာ ဒီ Account ထဲမှာ ရင်းနှီးထားရတာများမယ်ဆိုရင်ပေါ့ ( ငွေကြေးအရင်းအနှီး နဲ့ တခြားဂိမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာတွေပေါ့)။ ဒီထက်ပိုပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်နာမည်ထဲက character တွေ symbol တွေတစ်ခုချင်းစီကို အတိအကျမှတ်မိနေဖို့လိုတယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ ဒါက ကိုယ့် credit တွေ top up လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်နာမည်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
သင့် Free Fire နာမည်ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေပါသလား? Codashop မှာ FF Diamonds တွေအလွယ်တကူ Top up လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Credit Cards တွေ passwords တွေထားဖို့မလိုဘဲ စိတ်ချရပြီး လွယ်ကူပါတယ်။
BUY APP & GAME VOUCHER ONLINE
Previous articleOnepay နဲ့ Codashop မှာ Mobile Legends အတွက်စိန်ဝယ်ယူပြီး ၂၀% လျှော့ဈေး ရနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည့်အချက်များ။
Next articlePUBG Mobile မှာ Royale Pass ဘယ်လိုဝယ်မလဲ
Codashop ရဲ့ နှစ်ကုန် Promotion မှာ ဆုကြီးကြီးတွေ ...